Tottenham Victor Wanyama ayaa Dib u Soo laabtay muddo Dhowr bilood ah uu ku maqnaa -
HomeciyaarahaTottenham Victor Wanyama ayaa Dib u Soo laabtay muddo Dhowr bilood ah uu ku maqnaa
Tottenham Victor Wanyama ayaa Dib u Soo laabtay muddo Dhowr bilood ah uu ku maqnaa
January 2, 2018 F.G ciyaaraha 0
Tottenham Victor Wanyama ayaa soo laabtay ka dib muddo afar bilood ah uu ku maqnaa dhaawac jilibka ah.
Macalinka Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu soo laabanayo qadka dhexe ee kooxda Spurs ay wajahayaan labo kulan oo Premier League ah seddexda cisho, safar uu ku tagayo Swansea City ka hor kulanka London derby ee West Ham United.
“Victor ayaa diyaar u ah inuu noqdo sida laga filayo maadaama 4 bil garoomada ka maqnaa waxaana haatan harsan tantano muhiim ah waxeyna u baahantahay iney muujiso dadaal dheer si aan uga muuqano hogaanka sare ayuu Pochettino u sheegay website-ka kooxda.
“Victor ayaa laga yabaa in uu safto kulanda maanta ee kooxdiisa la leedahay Swansea waxayna haatan heysataa kooxda fursado ay guulo ku gaari karto waan arki doonaa. Warka wanaagsani waa in uu yahay tabobar diyaar u ah xulashad wanaagsan.